Ny orinasanay - Nanchang Cemented Carbide Limited Liability Company
Momba ny NCC
Nanchang Cemented Carbide Limited Liability Company(NCC) dia orinasa fehezin'ny fanjakana, izay niainga avy amin'ny 603 Plant naorina tamin'ny May 1966. Nantsoina hoe Nanchang Cemented Carbide Plant izy io tamin'ny 1972. Nanova tsara ny endriky ny tompony izy tamin'ny May 2003 mba hananganana ofisialy. Nanchang Cemented Carbide Limited Liability Company.It dia tantanan'ny China Tungsten High Tech Materials Co., Ltd.
Amin'ny fananana rojo indostrialy feno avy amin'ny akora vita amin'ny tungstène ka hatramin'ny fitaovana fikosoham-bary, ny NCC dia iray amin'ireo fototra lehibe indrindra mampiditra ny famokarana, ny fitantanana ary ny fanondranana ny vokatra vita amin'ny vovoka tungstène, ny tady karbida simenitra, ary ny fitaovana fametahana lavaka ao Shina, ny vokatra azony. ampiasaina betsaka amin'ny metallurgy, milina, fiara, aerospace, fitrandrahana ara-jeolojika, elektronika, sns.
Taorian'ny 50 taona mahery ny fampandrosoana, ny orinasa dia nahatratra 4000 taonina ny famokarana isan-taona ny tungstène vovoka sy ny tungstène carbide vovoka, 1000 taonina simenitra carbide tehina sy ny vokatra hafa, 10 tapitrisa ny simenitra carbide lavaka machining fitaovana fanapahana. Manana mpiasa 611 ny NCC ary renivohitra voasoratra anarana RMB 279.4 tapitrisa.
Fanahin'ny orinasa: Manompoa ny mpanjifa amin'ny asa mafy
Mandresy ny ho avy amin'ny kalitao
voamarina sy voamarina:
Mandinika tsara ny kalitaon'ny vokatray izahay. Afaka miantehitra amin'ny vahaolanay foana ianao. Ny fenitra ISO 9001 dia mamaritra ny fepetra takiana ambany indrindra amin'ny rafitra fitantanana kalitao. Mifototra amin'izany, manatsara hatrany ny fizotranay anatiny izahay. Amin'izany fomba izany no miantoka anao ny tsara indrindra amin'ny kalitaon'ny vokatra, ny vokatra ary ny fifaninanana. Misy fanaraha-maso tsy tapaka ataonay hanamafisana izany.
Ny NCC dia mampihatra mafy ny rafitra fitantanana kalitao ISO 9001: 2015, ary mampihatra ny rafi-pitantanana kalitaon'ny mpiasa manontolo mba hiantohana ny serivisy mitohy sy mahomby amin'ny mpanjifa.
● Fanaraha-maso ara-pitaovana sy fankatoavana
● Fanaraha-maso sy fankatoavana ny refy
● taratasy fanamarinana ara-pitaovana omena isaky ny fangatahana
● Misy famakafakana santionan'ny mpanjifa
Manana fitaovana tena mandroso sy injeniera za-draharaha izahay, ary ny vokatra tsirairay dia sedraina mandritra ny tsingerin'ny famokarana azy mba hifanaraka amin'ny fepetra voafaritra.
Ny rafitra fiantohana kalitao dia miantoka fa ny vokatra tsara indrindra ihany no azo aterina amin'ny mpanjifany ary ara-potoana foana ny fanaterana rehetra.
Ny Departemantan'ny Fikarohana sy Fampandrosoana anay dia natokana hatrany hanao ny tsara indrindra amin'ny fahaiza-manaony amin'ny teknolojia sy vokatra mandroso mba hanomezana fahafaham-po kokoa ny filan'ny mpanjifa efa misy sy ho avy. Ny NCC dia nitazona hatrany ny toerana avo lenta amin'ny fahaiza-manao R&D ara-teknolojia any Shina, ary manana foibem-paritany teknolojia, ary foibe fanadihadiana sy fitsapana, miaraka amin'ny mpiasa 112 mitazona anaram-boninahitra ambony matihanina sy teknika, mari-pahaizana maîtrise na ambony.
NCC dia nanangana laboratoara matihanina mba hizaha toetra ny fananana sy ny masontsivana ho an'ny tungstène carbide vovoka sy tungstène carbide alloys, laboratoara matihanina amin'ny fitaovana fikosoham-bary fitsapana mba hanao comparative fikosoham-bary fitaovana isan-karazany carbide simenitra.
NCC manana foibem-paritany-lever teknolojia, izay nandray anjara tamin'ny fanavaozana sy ny famolavolana ny 12 fenitra nasionaly nahazo 18 nahazo alalana patanty, anisan'izany ny 3 famoronana patanty sy 15 utility modely patanty.
Mandritra izany fotoana izany, dia nanangana fiaraha-miasa ara-teknika maharitra sy maharitra miaraka amin'ireo anjerimanontolo lehibe sy ivon-toeram-pikarohana siantifika fanta-daza.
Miaraka amin'ny tanjona hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpiara-miombon'antoka aminay, dia mikaroka hatrany ny fomba hanatsarana sy hamoronana fitaovana fanapahana avo lenta izay mampihena ny vidiny sy mampitombo ny vokatra, na dia amin'ny toe-javatra sarotra indrindra aza.
Ao amin'ny NCC, feno sy manara-penitra ny fizotran'ny famokarana, manomboka amin'ny vovoka manta voadio ka hatramin'ny banga sinterina farany.
Tsy misy ezaka atao ao amin'ny Departemantan'ny R&D, ary ny orinasa manontolo dia miasa amin'ny fanomezana banga sinterina izay mampitombo ny vokatra, mampihena ny vidin'ny mpanjifa ary manampy amin'ny famoronana vokatra azo antoka.
Ao amin'ny NCC, manantitrantitra izahay fa ilaina ny fahasalamana sy fiarovana ny mpiasanay ary manana ny laharam-pahamehana ary fototry ny hetsika ataonay. Manolo-tena amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izahay ary ny fitantanana dia tanterahina araka ny ISO 14001 Environmental Management System.
Carbide Tools, Milling Cutter, Solid Carbide End Mills, Carbide Precision Tools, Fitaovana karbida, Carbide simenitra,